कुन प्रदेशमा कसको सरकार बस्छ ? (पूरा पढनुहोस्) | Ekhabar Nepal
राजनीति माघ १० २०७४ ekhabarnepal
निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव डेढ महिनापछि बल्लतल्ल प्रदेशसभा सदस्यहरुले माघ ७ गते सपथ लिएका छन् । यससँगै राजनीतिक दलहरु प्रदेश सरकार निर्माणमा जुटेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक बन्न लागको प्रदेश सरकार निर्माणको तयारीले नागरिकको ध्यान तानेका छ । उनीहरुमा कुन प्रदेशमा कुन राजनीतिक दलको सरकार बन्छ भन्ने कौतुहलता बढ्दै गइररहेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सांसदको शपथपछि दलहरुको ध्यान प्रदेशसभा सरकार गठन र राष्ट्रियसभा चुनावमा केन्द्रित भएको छ ।
राष्ट्रियसभा चुनाव माघ २४ गते हुँदैछ । दलहरुले राष्ट्रिय सभामा आ आफ्ना उम्मेदवारहरु समेत छानि सकेका छन् । प्रदेशसभा चुनावको मतपरिणाम हेर्दा ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने छ भने २ नं. प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ । उद्यपी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मधेश वादीदलहरुले वाम गठबन्धन संग मिलेर गएभने प्रदेश सभामा वाम गठबन्धन लगाएत मधेशवादीदलहरुको सरकार निमार्ण हुने देखिन्छ ।
७ वटा प्रदेशमध्ये १ र ३ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेश नं. ६ मा पनि एमाले बलियो छ । २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । २ नम्बर प्रदेशमा मधेसवादीको र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्नेमा कुनै शंका छ्रैन । तर, २ नं. प्रदेशमै कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा फोरम नेपाल र राजपाबीच सहमति भैसकेको छैन । प्रदेश नं १ मा एमालेका ५१ जना सांसद छन । कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, संघीय समाजवादी फोरमका ३, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद १ नम्बर प्रदेशमा छन् । यो प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । एमालेका शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश नंं २ मा संघीय समाजवादी फोरमका २९, राजपाका २५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी ११ सांसद छन् । यहाँ मधेसवादी दल मिलेर सरकार बनाउने निश्चित छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई मुख्यमन्त्री दिनेगरी राजपा र फोरमबीच छलफल चलिरहेको छ ।
प्रदेश नं ३ मा एमालेका ५८, माओवादीका २३, कांग्रेसका २१, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २ तथा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्तिका एकएक सांसद छन । यहाँ पनि एमालेकै मुख्य मन्त्री बन्नेछन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको लागि अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापितको नाम चर्चामा छ ।
प्रदेश नं ५ मा एमालेका ४१, माओवादीका २०, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५ तथा राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक सांसद छन । यहाँ एमालेका शंकर पोख्रेल मुख्य मन्त्री बन्ने पक्का भैसकेको छ । उनलाई एमालेले प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ ।
प्रदेश नं ६ मा एमालेका २०, माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यहाँ एमालेका प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका छन् । तर, यो प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बढेपछि एमाले ६ नं. प्रदेशले त्यसको विरोध गरेको छ ।
प्रदेश नं ७ मा एमालेका २५, माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमालेले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छोड्ने लगभग पक्काजस्तै छ । २ नं. बाहेक सबै प्रदेशमा बाम गठबन्धले बलियो देखिए पनि ६ नम्वर प्रदेशमा माओवादी र एमालेको दाबी र अडान कायमै रह्यो भने त्यसले गठबन्धनको मर्मलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि माघ १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू हुने आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सँगसँगै अब, प्रदेशसरकार गठनको तयारी मा लाग्न थालेका छन् दलहरु । प्रदेशसदस्यहरु सपथ खाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दुई नं. प्रदेशमा त माघ २१ गतेका लागि प्रदेश अधिवेशन आह्वान भैसकेको छ । फागुनको पहिलो सातासम्म प्रदेश सरकार गठन हुनसक्ने विश्लेषकहरु को दावी छ ।